Milina fanosotra, Masinina fanarenana, Masinina fanaovana kajy - Sunkia
Milina SKM amidy eran'izao tontolo izao
Sunkia Machinery dia mpanamboatra mpitarika iray izay nifantoka tamin'ny fampiroboroboana sy ny famokarana milina paositra avo lenta mandritra ny 12 taona. Izahay dia orinasa teknolojia avo lenta izay manana teknolojia patanty misy milina fanamafisam-peo misy asa maro. Masinina manarona taratasy marani-tsaina. Ny masininay dia manana taratasy fanamarinana CE. Any Dalingshan Town, tanànan'i Dongguan, faritanin'i Guangdong no misy anay, izay manana ny ekipa mpamokatra ambaratonga voalohany, ny rafitra fiantohana kalitao tonga lafatra, ary ny ekipa fikarohana sy fampandrosoana ara-teknika matanjaka. Orinasa voamarina ISO izahay.
Izahay dia nanantitrantitra ny fitsipiky ny "kalitao, fahamendrehana ary fientanam-po" hatramin'ny nananganana azy tamin'ny 2008.
Masinina fanontam-pirinty Sunkia avo lenta avy any Shina ka manerantany
Mazava ho azy fa haingam-pandeha haingam-pandeha UV Varnish UV ...
Ny vinavinan'ny indostrian'ny fanontam-pirintin'i Shina ao anatin'ny dimy taona ho avy dia maminavina ny fiovan'ny toe-karena ara-toekarena ao Shina, ny fanitsiana ny firafitry ny indostria, ny fihenan'ny tombotsoan'ny indostrian'ny fanontana, firy ny fanontana sy ny fonosana fonosana mila mamaha ny olan'ny ...
Handresy plasticizer sakana ara-teknika gre ...
Ny sakana ara-teknika sy ny fetrany ankehitriny amin'ny fampandrosoana indostria dia matetika sarotra tapahina, ary toy izany koa ny vokatra plastika any Shina. Ahoana no fomba hahatratrarana maitso tsy misy poizina, ny fomba handresena ireo sakana ara-teknikan'ny plastika tandrefana no ifantohan'ny fikarohana indostrialy Back ...